ESI MEPỤTA EMAIL NA MAIL.RU MA DENYE AHA MAKA N'EFU - MAIL.RU MAIL - 2019
Otu n'ime ọrụ ndị kachasị ewu ewu nke na-enye ike ịmepụta igbe akwụkwọ ozi bụ Mail.ru, ndebanye aha anyị ga-agwa gị n'okpuru ebe a.
Esi enweta mailbox na Mail.ru
Ịdenye akaụntụ na Mail.ru adịghị ewe oge na mgbalị dị ukwuu. Na mgbakwunye na mail, ị ga-enweta nnukwu netwọk mmekọrịta ebe ị nwere ike ikori, lee foto na vidiyo nke ndị enyi, kpọọ egwuregwu, ma nwee ike iji ọrụ ahụ. "Azịza Mail.ru".
Gaa na isi peeji nke saịtị Mail.ru ma pịa bọtịnụ "Ndebanye aha na mail".
Mgbe ahụ, akwụkwọ ahụ ga-emeghe, ebe ịkwesịrị ịkọ data gị. Ngalaba achọrọ "Aha", "Aha Ikpeazụ", "Ụbọchị ọmụmụ", "Paul", "Igbe akwụkwọ ozi", "Paswọdu", "Tinyegharịa paswọọdụ". Mgbe ị juputara mpaghara niile achọrọ, pịa bọtịnụ ahụ "Deba aha".
Mgbe nke ahụ gasịrị, ị ghaghị ịbanye captcha na ndebanye aha! Ugbua enwere uzo ole na ole. Ngwa ngwa, ozugbo ị banyere, a ga-akpali gị ịwụnye foto na ntinye aka nke ga-etinye na ozi ọ bụla. Ị nwere ike ịzọ ụkwụ a site na ịpị bọtịnụ kwesịrị ekwesị.
Wee họrọ isiokwu ịchọrọ ka mma.
N'ikpeazụ, a ga-enye gị ohere iji wụnye ngwa ngwa mkpanaaka iji nwee ike iji Mail.ru na ekwentị gị.
Ugbu a ị nwere ike iji ozi ọhụrụ gị na debanye aha na ihe ndị ọzọ weebụ. Dịka ị nwere ike ịhụ, iji mepụta onye ọrụ ọhụrụ, ọ dịghị mkpa ịchọrọ oge na mgbalị dị ukwuu, mana ugbu a, ị ga-aghọ ọrụ na-arụ ọrụ nke Intanet.
https://termotools.com ig.termotools.com © Mail.ru Mail 2019